Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay ka go’an tahay xiriir iskaashi oo qoto dheer inay la yeelato… – Hagaag.com
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay ka go’an tahay xiriir iskaashi oo qoto dheer inay la yeelato…
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ka go’an tahay xiriir iskaashi oo qota dheer oo ay la yeelato Soomaaliya si ay qeyb wanaagsan uga noqoto tartanka Dalalka Geeska Africa ee muhiimka u ah hormarka.
Wang Yi oo ah Wasiirka Arrimaha Dibada ee Shiinaha ayaa hadalka sheegay kadib markii ay khadka taleefoonka kuwada sheekeysteen Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Mr Wang ayaa sheegay in Soomaaliya lagu tilmaami karo saxiib wanaagsan oo leysku haleyn karo walaalna u ah sida uu hadalka u dhigay dowladda Shiinaha, isaga oo intaa raaciyay in Soomaaliya xubin muhiim ah ka tahay Iskaashiga China iyo Africa iyo waliba kan kale ee China iyo Carabta.
Wang ayaa intaa sii raaciyay in dowladda Shiinaha ay diyaar u tahay in ay ka faa’ideysato fursada sanad-guurada 60-aad ee xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal si loo hirgeliyo is afgaradkii ay gaareen hoggaamiyeyaasha labada dal iyo in lagu riixo xiriirka Shiinaha iyo Soomaaliya meel sare.
“Waxeynu ka mid nahay dalalkii ugu horreeyay ee qiray madaxbannaanida Soomaaliya, Soomaaliyana waxay ahayd dalkii ugu horreeyay ee Bariga Afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la sameeya Jamhuuriyadda dadka Shiinaha” ayuu yiri Wang.
Hadalkan ayaa imanaya xili Dowladda Shiinaha ay siweyn uga carrootay xiriirka Diblomaasiyadeed ee Taiwan ay la yeelatay Somaliland oo ay aragto Shiinaha talaabo aan sax aheyn.